Gadaan Oromoo Booranaa Jilatti Jira. – Oromedia
Home » Uncategorized » Gadaan Oromoo Booranaa Jilatti Jira.
Gadaan Oromoo Booranaa Jilatti Jira.
February 27, 2017 @oromedia 0 Uncategorized,
(Oromedia, 27 Guraandhala 2017) Jilli Odaa Oromoo Booranaa guyyoota 27f turu Aanaa Areerootti adeemsifamaa akka jiru Waajjirri Aadaafi Turizimii godinichaa ibse.
Akka Gaazexaan Bariisaa Waajjira Aadaafi Turizimii Godina Booranaatti ogeessa sona aadaa, Obbo Boonayyaa Diidoo wabeeffatee gabaasetti, jilli Odaa Oromoo Booranaa guyyoota 27f turu Hagayya 9 bara 2008 irraa eegalee Aanaa Areeroo, ardaawwan adda addaa afuritti adeemsifamaa jira.
Sirnichi waggoota saddeet saddeetiin haala ho’aadhaan kan geggeeffamu ta’uu kan eeran ogeessichi, kan baranaa kun jalabultii sirni Gadaa Oromoo Jaarmiyaa Saayinsii, Barnootaafi Aadaa Dhaabbata Mootummoota Walta’anii (UNESCO)tti galmaa’uuf jedhutti kabajamaa jiraachuunsaa adda isa taasisa jedhaniiru.
Jilli adeemsifamaa jiru kun agarsiiftuuwwan sirna Gadaa Oromoo keessaa tokko ta’uu eeranii, waantonni jila kanarratti raawwataman tattaaffii Sirna Gadaa Oromoo Yuneskootti galmeessisuuf taasifamaa jiruuf akka galteetti kan tajaajilu ta’uus himaniiru.
Oromoon Booranaa sirnicha ija addaatiin kan ilaalu ta’uus eeranii, ummatichi odaa bulee qaalluu muudee, abbootii Gadaa akkasumas warra jila Odaa kana wajjin buluu barbaadan fuudhee eebbifachuun kan raawwatamu ta’uus beeksisaniiru.
Jila odaa adeemsifamaa jiruun walqabatee sirna walharkaa fuudhiinsa baallii Guraandhala dhufu raawwatamurratti Abbaan Gadaa Booranaa 70fa, Guyyoo Gubbaan baallii kan kennan yoo ta’u, Abbaa Gadaa 71fa ta’uun ammoo Kuraa Jaarsoo baallii ni fudhatu.
Jilliifi ardaan kun kan eebbaa waan ta’eef ummata wajjin goodaa buluun kan geggeeffamu dha.
Previous: Oromo Opposition leader and two others charged with terrorism
Next: Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Eegale